[Monday, April 9th, 18] :: Jawaari oo la sheegay in uu iscasilay
Muqdisho (RH) Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in guddoomiyihii baarlamaanka Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari oo maanta is casilay in maalinta Arbacada ee soo socota uu la hadli doono xildhibaannada isagoo macsalaameen donna.
Xildhibaaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah xildhbaannadii taageersanaa in uu iscasilo Jawaari ayaa BBC-da u sheegay in Jawaari uu Arbacadda la hadli doono xildhibaannada aqalka hoose isagoo macsalameen doona maadama uu shan sanno xilka afhayeenka baarlamaanka uu hayey isla markaana la soo shaqeeyay labo baarlamaan oo dalka soo maray.
Iscasilaadda Jawaari ayaa soo baxday saaka aroortii kaddib kulan xildhibaannada taageersanaa mooshinka Jawaari ay kulan ku yeesheen guriga Ummadda balse inta kulanka uusan furmin uu u yimid guddoomiye ku xigeenka koowaad baarlamaanka Muudeey isagoo u akhriyey qoraal uu sheegay in uu soo qoray Jawaari oo ku caddeenayo in uu iscasilay.
Weli ma jirto cid xaqiijin karta in uu Jawaari is casilay, mana jirto wax war ah oo laga hayo Jawaari iy xafiiskiisa ka soo baxay balse xildhibaanno ku dhowdhow iyo saraakiil ka tirsan dowladda ayaa xaqiijiyey in uu Jawaari xafiiska banneeyey.
Loolanka ka dhashay mooshinka Jawaari ayaa curyaamiyey shaqooyinkii dolwadda muddo saddex toddobaad, waxaana barbar socday qaraxyo ka dhacay caasimadda oo kuwii ugu dambeeyay ay dhaceen Jimcihii la soo dhaafay kaddib markii qaraxyo loo adeegsaday baabuur ay ka dhaceen baro kontorool oo ciidamada ay joogeen.